Ukuqonda uMbutho ngeNkcubeko
Sciences soLuntu Uphando kunye nezibalo
Abaphandi banokufunda okubanzi malunga noluntu ngokuhlalutya iimpahla zenkcubeko ezifana namaphephandaba, amaphephancwadi, iinkonzo zethelevishini, okanye umculo. Oku kuthiwa uhlalutyo lomxholo . Abaphandi abasebenzisa uhlalutyo lokuqukethwe abafundanga abantu, kodwa bafunda ukuxubusha abantu abavelisa njengendlela yokudala umfanekiso woluntu lwabo.
Uhlalutyo lokuqukethwe luvame ukusetyenziswa ukujonga utshintsho lwezenkcubeko nokufunda iinkalo ezahlukeneyo zenkcubeko .
Izazi zenzululwazi ziyayisebenzisa njengendlela engathanga ngqo yokujonga indlela amaqela asekuhlaleni aqondwa ngayo. Ngokomzekelo, banokuhlola indlela ama-Afrika aseMerika aboniswe ngayo kwimiboniso yethelevishini okanye indlela abafazi abachazwe ngayo kwiintengiso.
Ekuqhubeni uhlalutyo lomxholo, abaphandi bayalinganisa baphinde bahlalutye ubukho, intsingiselo, kunye nobudlelwane bamagama kunye neengcamango kwizinto zokufakelwa zenkcubeko abazifundayo. Bese benza inkcazo malunga nemiyalezo ngaphakathi kwezinto zokusebenza kunye nenkcubeko abayifunayo. Kuhlalutyo lwaso oluphambili, ukuhlalutya umxholo ngumsebenzi wesitatisti oquka ukuhlukanisa ezinye iinkalo zokuziphatha nokubala inani la maxesha ukuziphatha okunjalo kwenzeka. Ngokomzekelo, umphandi unokubala inani lamaminithi amadoda kunye nabasetyhini abonakala kwisikrini kwimibukiso yethelevishini kwaye bathelekise. Oku kusivumela ukupenda umfanekiso weendlela zokuziphatha eziphantsi kwentsebenziswano yentlalo eboniswe kumajelo.
Uhlalutyo lokuqukethwe lunamandla amaninzi njengendlela yokuphanda. Okokuqala, kuyindlela efanelekileyo kuba ayikho into ebalulekileyo. Okokuthi, akukho mphumo kumntu ofundwayo kuba i-artifact yenkcubeko sele ikhutshwe. Okwesibini, kulula ukufumana umthombo wemithombo yeendaba okanye upapasho umphandi unqwenela ukufunda.
Ekugqibeleni, ingabonisa iinjongo zengxelo yeziganeko, imixholo kunye nemiba engenakubonakala ngokukhawuleza kumfundi, umbukeli, okanye umthengi jikelele.
Uhlalutyo lokuqukethwe luba nobuthathaka obuninzi njengendlela yokuphanda. Okokuqala, kunqongophele koko kunokufunda. Ekubeni isekelwe kuphela ekunxibelelaneni ngokukhulu-nokuba yimbonakalo, ngomlomo, okanye ebhaliweyo-ayikwazi ukusitshela oko abantu abakucinga ngayo ngale mifanekiso okanye nokuba bayichaphazela njani ukuziphatha kwabantu. Okwesibini, kungenokuba yinjongo njengoko ibanga ukususela ekubeni umphandi makakhethe kwaye abhale idatha ngokuchanekileyo. Kwezinye iimeko, umphandi kufuneka enze ukhetho malunga nendlela yokutolika okanye ukuhlukanisa iindlela ezithile zokuziphatha kunye nabanye abaphandi banokuyichaza ngokuhlukileyo. Ubuthathaka bokugqibela bokuhlalutya umxholo kukuba unokuchitha ixesha.
Andersen, ML kunye no-Taylor, HF (2009). I-Socialology: Ii-Essentials. EBelmont, CA: Thomson Wadsworth.
Izilinganiso ezisetyenziswe kuPhando lwezesayensi yeNtlalo
I-Equation Equation Modeling
Ukuqonda uphando loPhando loLuntu
Ukuphila Nabantwana Bakho? AWUKHO wedwa
Iingcamango zeendlela zokuPhando eziQoqosho
Iintlobo zee-boilboat Rudders